प्रशिक्षणका क्रममा नै दुई खेलाडी एक आपसमा कुटाकुट गरेपछि - Experience Best News from Nepal
१किन गर्मी महिनामा हुन्छ महिला पुरषमा बढी उत्तेजना ! यस्तो छ डाक्टरको भनाइ
२दुखद कोपा हार पश्चात, भ्यान डाइक बालोन डी’ओर २०१९ का प्रमुख दावेदार !!
३कुनै मोडलभन्दा कम छैनन् तेरिया मगर (हेर्नुहोस ५ तस्वीरहरु)
४भारतीय कांग्रेस पार्टीकी महासचिव प्रियंका गान्धी पक्राउ !
५६ मिलियनमा रोमा नगए हिगोइनको पारिश्रमिक घटेर युभेन्ट्समा मात्र ४ मिलियन हुने
६हिट फिल्म कबिर सिंह पश्चात ३ करोड पारिश्रमिक लिने साहिदको कति पुग्यो पारिश्रमिक ??
७जीम पश्चात यस्तो देखिईन केकी, हेरौ केकीको जीम गर्दाको ६ तस्बिरमा !!
८गर्भवती बनाए ५ सय यूरो पारिश्रमिक दिने यी युवतीको घोषणा !!
जर्मन च्याम्पियन बायर्न म्युनिखका दुई खेलाडी रोबर्ट लेवान्डोस्की र किङस्ले कोमानबीच प्रशिक्षणको क्रममा झगडा परेको छ ।
बिहीबार टोलीको प्रशिक्षणका क्रममा लेवान्डोस्कीले कोमानलाई केहि भनेपछि उनी रिसाएका थिए । रिस थाम्न नसकेका कोमानले भनाभन गर्न थालेपछि विवाद चर्कंदै गैर दुई खेलाडीले एक अर्कामाथि मुक्का बर्साएका थिए । दुई खेलाडीबीच झगडा सुरु भएपछि डिफेन्डर द्वय जेरोम बोटेङ र निकलास सुलले दुई खेलाडीलाई छुट्याएका थिए ।
प्रशिक्षक निको कोभाचले दुवै खेलाडीलाई बाहिर राख्दै केहीबेर प्रशिक्षण अगाडी बढाएपनि पछि दुवै खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा सामेल गराएका थिए । प्रशिक्षक कोभाचले शुक्रबार हुने पत्रकार सम्मेलनमा घटनाबारे विवरण दिने बुझिएको छ । दुवै खेलाडीलाई क्लबले अन्तरिक कारवाही गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
अघिल्लो सिजन पनि लेवान्डोस्की र म्याटस हमल्सबीच प्रशिक्षणमा झगडा पर्दा सहकर्मीहरुले छुट्याउनु परेको थियो । क्लबले त्यसबेला दुवै खेलाडीसँग स्पष्टिकरण लिँदै चेतावनी दिएर छाडेको थियो । बयार्णले शनिबार हुने खेलमा माइन्जको सामना गर्दैछ ।
यस्ता छन् नयाँ सिजनका निम्ति ट्रान्सफरका सनसनीपूर्ण १० ठुला सम्झौता !! कसको रेट कति ??
च्याम्पियन लिग फाइनल रेड्स र स्पर्स खेलिने स्टेडियम यस्तो छ !! हेर्नुहोस् ४ तस्बिरमा यस्तो छ वाण्डा
जर्मनीका स्टार फुटबलर “ओजिल”ले नेपाल बारे तस्बिर सहित “ट्विट” गर्दै खुशी ब्यक्त गरे !
पुनरागमनमा ब्रेक, सलाह र फर्मिनो विना उत्रिदा लिभरपूललाई बार्सिलोनाको त्रास
एक अर्जेन्टिनी र पोर्चुगि कसरी पहिलो नजरको भेटले सम्बन्धमा बाधिए !! रोनाल्डो र जर्जिना